crazy.com - CRAZY SUNDARI
प्रधान कार्यालय : पथरी - १ मोरङ
फोन नं. ०२१- ५५५३१७
पथरीका प्रायजसो स्टेज शोहरूमा छाउने गर्छिन् रिविता लिम्बू, २० । विशेषगरी आइटम डान्समा आफ्नो अभिरुचि भएकैले रिविता सफल कोरियोग्राफर बन्ने ध्याउन्नमा छिन् । प्लस टु सम्मको अध्ययन गरिसककी रिविता ५ फुट ४ इन्च अग्ली छिन् । सांगीतिक
रमझम या त महोत्सवमा उनको ‘डान्स’ विना खल्लो महसुस गर्छन् दर्शकहरू । उनी भन्छिन्–‘भविष्यमा एक सफल कोरियोग्राफर बन्न म प्रयासरत छु ।’
– सन्तोष राई
पुष्पाञ्जली फोटो कन्सर्न
पथरी व्यूटी पार्लर, पथरी
सौखका कारण चलचित्र क्षेत्र रोजेको उनी बताउँछिन् । अक्सर नारी पात्रले असहज मान्ने किस सिन र वेड सिनलाई आफूले सहज रुपमा ग्रहण गरेको जेनी बताउँछिन् । सुनसरीको भरौल–३ घर भएकी जेनी निर्माणाधिन चलचित्र ‘मिशन बाइक’ र ‘समानता’की नायिका हुन् । केही म्युजिक भिडियोमा समेत जमेकी यी यौवना पहिरनको मामलामा पनि उत्तिकै उदार छिन् । कथाले मागेअनुसार ‘टु पिस’ मा एक्सपोज हुने पनि जेनीले निर्धक्क बताइन् । चलचित्र ‘मिसन बाइक’मा सकेसम्म एक्सपोज भएको बताउने नायिकाले रेष्टुरेण्टमा काम गर्ने युवतीको रोल गरेकाले चरित्रलाई न्याय दिन ‘वेड सिन’ पनि दिइएको बताइन् । पर्दामा यतिबिघ्न उदार हुने जेनीले वास्तविकतामा भने मर्यादामै रहेको दाबी गरिन् । भनिन्–‘मेरो पनि निजी जीवन छ, सामाजिक मूल्य मान्यता भन्दा टाढा रहन सक्दिनँ, पर्दामा भनेको अर्कै कुरा हो ।’ पर्दामा रोमान्स गर्दा कुनै पनि फिलिङ्स नभएको जेनीको भनाइ छ । सेक्सको अनुभव लिइसकेको बताउने जेनीले त्यस्तो ‘रिलेशन’ विश्वासिलो व्यक्तिसँग मात्र हुनुपर्ने जिकिर गरिन् ।
– मिलन के राउत.
तस्बिर ः पंकज कार्की
लोकेशन ः वेतिनी सिमसार, उर्लाबारी
संयोजन ः अस्मिता डिजिटल फोटो स्टुडियो, उर्लाबारी
करुणालाई ठुलो पर्दामा आउने रहर
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका १३ तोरिबारिकि करुणा कार्की मोडलिङ संगै अभिनयमा समेत जम्न चाहान्छिन् । उदयपुरे गायक चन्द्र तामाङको चर्चित पूर्वलि लोक गितहरुको भिडियो ‘भावना’ बाट अभिनय सुरु गरेकि करुणा छोटो समयमानै चर्चामा आएकीछिन्। अभिनय र मोडलिङ नगर्न घरबाट निक्कै दवाव आएपनि आफ्नै निर्णयलाई अगाडि सार्दै मोडलिङ थालेकि हुन करुणाले । पहिलोपटक म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकि करुणाको प्रस्तुति देखेर चलचित्र निर्माण कम्पनीले समेत उनलाई चलिचित्रमा अभिनय गर्न प्रस्ताव गरेको करुणाले बताइन। ठुला पर्दाका चलचित्रमा अभिनय गर्ने रहर हुदाहुदैपनि घरबाट समय दिन नसक्ने भएपछि उनलाई समस्या परेको छ । उनि भनिन्छ— चलचित्र क्षेत्रमा आउन चाहाने किशोरीहरु सुरक्षित हुदैनन् भनेर घरबाट दवाब आउछ । उनले ‘भावना’ एल्बमका ‘आउहै कान्छि उदयपुर घुम्न’, ड्राईभर दाई खलासि भाई जस्ता गितमा अभिनय गरे संगै अन्य आधा दर्जन म्युजिक भिडियोमा समेत अभिनय गरि सकेकि छिन् । उनी भन्छिन घरमा केहि समस्या आएपनि त्यसलाई चिरेर भएपनि आफ्ने उदेश्य नायीकानै बन्ने रहेको बताईन् । अन्य चलचित्रका कलाकार भन्दा म कम छैन, उनले भनिन–मेरो मेहनतलाई त्यतिकै खेर जान दिन्न ।
पुनम योङहाङ लिम्बू (२०), पहिलो पटक सम्पन्न स्पार्क मिस लिम्बू–२०१२ को फाईनलमा पुगेकी एक सम्भावना बोकेको प्रतिस्पर्धी हुन् । स्पार्क मिस लिम्बूको धरान अडिसनबाट छानिएकी लिम्बू पथरी–१ निवासी हुन् । उनले धरान अडिसन पास गरेपछि काठमाडौंमा संघर्ष गरिरहेकी छिन् । यस्तो प्रतियोगितामा पुगेर चर्चा बटुल्ने पथरीकै सम्भवतः पहिलो पनि बनेकी छिन् पुनम । पथरी बहुमुखी क्याम्पसमा बीबीएस दोस्रो वर्षमा अध्ययन गरिरहेकी लिम्बू पथरी–१ मा अवस्थित एभरेष्ट आमाविका एक कुशल शिक्षिका पनि हुन् । उनको भविष्यमा सफल चार्टर एकाउण्ट (सीए) बन्ने लक्ष्य छ । उनले भनिन् –‘मलाई भीवर्स च्वाइस’ टाईटल जिताउनको लागि सबैले भोट गरेर सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’
पुनमलाई भोट गर्नका लागि टाईप sml 08 लेखी
४२४३ मा सेन्ड गर्दा उनलाई थप टेवा पुग्नेछ ।
– रोस्मन राई
तस्बिर ः युवराज शर्मा
लोकेशन ः पुष्पाञ्जली फोटो कन्सर्न, पथरी
मेकअप ः चन्द्र देवान (कोरियन ब्यूटी पार्लर, पथरी)
बालापनदेखि नै मोडलिङ र कलाकारिता क्षेत्रमा जम्ने इच्छा राखेकी सुनसरी धरानकी खुशी राईको इच्छा अहिले सार्थक हुादै आएको छ । प्लस टुमा अध्ययनरत खुशीको फिजिकल फिनेसले समेत उनलाई साथ दिएको छ । बालापनदेखि नै विद्यालय र गाउा घरमा हुने नृत्यहरु गर्दै आएकी खुशीको एकपछि अर्को हुादै सफलता प्राप्ती हुनुमा उनको फिजिकल फिटनेस नै हो । उनलाई मोडलिङ र कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नको लागि घर परिवारबाट धेरै सहयोग छ । टिनएज पार गर्न लागेकी खुशीले ‘मिसनमाल’बाट चलचित्र क्षेत्रमा ‘डेब्यू’ गरेकी थिइन् । प्रेम र सेक्सको मामिलामा चाहिा उनी अलिक
पछाडि नै परेकी रहेछिन् । अहिलेसम्म पनि उनलाई कसैले प्रेम प्रस्ताव
राख्ने हिम्मत गरेको छैनन् । सेक्सको अनुभवको प्रश्नमा चाहिा खुसीले
आफूसाग सेक्सको अनुभव नरहेको बताइन् । सेक्सको विषयमा कुरा
गर्दा खुशीले हाासेर टारिन् ।
– शब्द : हेम गिरी
हेर्दै 'कोरियन गर्ल' झैं देखिने सासा लिम्बू (२१) मोडलिङ र फेसन डिजाइन दुवै विधामा अब्बल छिन्। भविष्यमा सफल अभिनेत्री बन्ने ध्याउन्नमा लागेकी मोरङकी बासिन्दा लिम्बू अहिले काठमाडौंमा फेसन डिजाइनसम्बन्धीे तालिम लिइरहेकी छिन्। उनले आधा दर्जनजति म्युजिक भिडियो तथा केही लघुचलचित्रमा समेत अभिनय गरिसकेकी छिन्। ५ फुट ३ इन्च अग्ली सासा गायिका अञ्जु पन्तकी प्रशंसक हुन्। अभिनयमा पनि आफूलाई अब्बल साबित गर्न प्रयासरत लिम्बू नायक अनमोल केसी तथा नायिका प्रियंका कार्कीको अभिनयबाट प्रभावित छिन्। सारी र कुर्ता-सलवारकी पारखी लिम्बू फुर्सदमा फेसबुकमा साथीभाइसँग कुरा गर्न रुचाउँछिन्। फेसनेबल ड्रेसअप मन पर्छ,' सासा भन्छिन्- 'कलाकार बनेर सु-परिचित हुने सोचमा छु।'